နားကြပ်ဂွမ်းတံ မသုံးသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း – WunYan
နားကြပ်ဂွမ်းတံ မသုံးသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း
Posted on September 21, 2018 by whuk-46651
နားဖာချေးတွေကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဖယ်ရှားတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲ
မိမိရဲ့တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးအတွက် နားထဲက နားဖာချေးတွေကို မကြာခဏ ရှင်းထုတ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မှန်ကန်တဲ့နည်းလမ်းကို အသုံးပြုပြီး နားဖာချေးတွေကို ဖယ်ရှားသင့်ပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေက Q-Tip လို့ ခေါ်တဲ့ နားကြပ်ဂွမ်းတံလေးတွေနဲ့ နားဖာချေးဖယ်ရှားတာကို သဘောမတူကြပါဘူး။ အကြောင်းရင်းကတော့ နားကြပ်ဂွမ်းတံဟာ နားကိုဒုက္ခပေးနိုင်လို့ပါပဲ။
၁။ နားကြပ်ဂွမ်းတံက မသန့်ဘူးဆိုရင် နားထဲကို ပိုးဝင်နိုင်ပါတယ်။
၂။ ဂွမ်းစက နားထဲမှာ ကျန်မိတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၃။ နားကြပ်တံကို နားအတွင်းထဲ ထိုးသွင်းလိုက်တဲ့အခါ နားစည်ကိုလည်း ထိနိုင်ပြီး အကြားအာရုံထိခိုက်တဲ့အထိ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
၄။ နားဖာချေးတွေကိုလည်း ထိထိရောက်ရောက်ဖယ်ရှားမပေးနိုင်ပါဘူး။ နားကြပ်တံကိုထိုးသွင်းလိုက်တဲ့အခါ နားစည်ဝမှာရှိတဲ့ နားဖာချေးတွေကို အတွင်းဘက်ကိုတွန်းလိုက်သလိုဖြစ်သွားလို့ ပိုတောင်ဆိုးမှာပါပဲ။
ဒီလိုဆိုရင် နားထဲက နားဖာချေးတွေကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့ ဖယ်ရှားတာက အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲ?
နား၊နှာခေါင်း အထူးကုဆေးခန်းကို သွားမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်က ပိုးသတ်ထားတဲ့ကိရိယာကိုသုံးပြီး နားဖာချေးတွေကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ဖယ်ရှားပေးပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်တိုင် နားဖာချေးတွေကို ဖယ်မယ်ဆိုရင်တော့ ပါအောက်ဆိုဒ်ရည်ကို သန့်စင်တဲ့ရေနဲ့ရောပြီး နားထဲထည့်လိုက်တာနဲ့ နားဖာချေးတွေပျော်သွားတဲ့အခါ မနာမကျင်ဘဲ နားဖာချေးတွေ ဖယ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
နားကွပျဂှမျးတံ မသုံးသငျ့တဲ့ အကွောငျးရငျး
နားဖာခြေးတှကေို ဘယျလိုနညျးနဲ့ ဖယျရှားတာက အကောငျးဆုံးဖွဈမလဲ
မိမိရဲ့တဈကိုယျရညျသနျ့ရှငျးရေးအတှကျ နားထဲက နားဖာခြေးတှကေို မကွာခဏ ရှငျးထုတျလရှေိ့ကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ မှနျကနျတဲ့နညျးလမျးကို အသုံးပွုပွီး နားဖာခြေးတှကေို ဖယျရှားသငျ့ပါတယျ။ ဆရာဝနျတှကေ Q-Tip လို့ ချေါတဲ့ နားကွပျဂှမျးတံလေးတှနေဲ့ နားဖာခြေးဖယျရှားတာကို သဘောမတူကွပါဘူး။ အကွောငျးရငျးကတော့ နားကွပျဂှမျးတံဟာ နားကိုဒုက်ခပေးနိုငျလို့ပါပဲ။
၁။ နားကွပျဂှမျးတံက မသနျ့ဘူးဆိုရငျ နားထဲကို ပိုးဝငျနိုငျပါတယျ။
၂။ ဂှမျးစက နားထဲမှာ ကနျြမိတာမြိုးဖွဈနိုငျပါတယျ။
၃။ နားကွပျတံကို နားအတှငျးထဲ ထိုးသှငျးလိုကျတဲ့အခါ နားစညျကိုလညျး ထိနိုငျပွီး အကွားအာရုံထိခိုကျတဲ့အထိ ဖွဈသှားနိုငျပါတယျ။
၄။ နားဖာခြေးတှကေိုလညျး ထိထိရောကျရောကျဖယျရှားမပေးနိုငျပါဘူး။ နားကွပျတံကိုထိုးသှငျးလိုကျတဲ့အခါ နားစညျဝမှာရှိတဲ့ နားဖာခြေးတှကေို အတှငျးဘကျကိုတှနျးလိုကျသလိုဖွဈသှားလို့ ပိုတောငျဆိုးမှာပါပဲ။
ဒီလိုဆိုရငျ နားထဲက နားဖာခြေးတှကေို ဘယျလိုနညျးနဲ့ ဖယျရှားတာက အကောငျးဆုံးဖွဈမလဲ?
နား၊နှာခေါငျး အထူးကုဆေးခနျးကို သှားမယျဆိုရငျတော့ ဆရာဝနျက ပိုးသတျထားတဲ့ကိရိယာကိုသုံးပွီး နားဖာခြေးတှကေို ကြှမျးကြှမျးကငျြကငျြ ဖယျရှားပေးပါလိမျ့မယျ။ ကိုယျတိုငျ နားဖာခြေးတှကေို ဖယျမယျဆိုရငျတော့ ပါအောကျဆိုဒျရညျကို သနျ့စငျတဲ့ရနေဲ့ရောပွီး နားထဲထညျ့လိုကျတာနဲ့ နားဖာခြေးတှပြေျောသှားတဲ့အခါ မနာမကငျြဘဲ နားဖာခြေးတှေ ဖယျရှားနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။